RASMI: Jose Mourinho oo loo magacaabay macallinka cusub ee Kooxda Tottenham kaddib markii la cayriyey Pochettino – Gool FM
RASMI: Jose Mourinho oo loo magacaabay macallinka cusub ee Kooxda Tottenham kaddib markii la cayriyey Pochettino
Haaruun November 20, 2019
(London) 20 Nof 2019. Tababare Jose Mourinho ayaa loo magacaabay macallinka cusub ee kooxda Tottenham kaddib markii shaqada kooxdaas laga cayriyey Mauricio Pochettino.
Macallinkii hore ee kooxaha Chelsea iyo Manchester United ee Mourinho ayaa qalinka ugu duugay Spurs heshiis ku eg illaa xilli ciyaareedka 2022-23.
Guddoomiyaha kooxda Tottenham ee Daniel Levy ayaa xaqiijiyey inay Mourinho u magacaabeen macallinka cusub ee naadiga waxaana uu sheegay inuu yahay mid ka mid ah macallimiinta ugu guulaha badan kubadda cagta.
56-sano jirkaan Portuguese-ka ah ayaa ku guuleystay saddex horyaalka Premier League labadii waqti ee kala duwanaa oo uu la qaatay Chelsea, sidoo kale waxa uu dib ugu soo laabtay England isagoo maamule u ahaa Manchester United tan iyo sanadkii 2016-kii.
Bishii December ayaa Jose laga cayrisyey shaqada kooxda Manchester United, laakiin markale ayuu dib ugu soo laabtay dalka Ingiriiska isagoo hadda Laylin doona kooxda Tottenham.
Pochettino ayaa shaqada kooxda laga cayriyey wax ka yar lix bilood markii uu kooxda geeyey Final-kii Champions League, waxaana uu kooxda ka dhaqaajin waayey booska 14-aad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan kaddib markii la ciyaaray 12-kii kulan ee ugu horreeyey horyaalka.
Mourinho kaasoo sidoo kale soo maamulay Kooxaha Porto, Real Madrid iyo Inter Milan ayaa iska diiday fursado uu macallin ugu noqon karay kooxo badan oo ka dhisan Shiinaha, Spain iyo Portugal tan iyo markii uu ka tagay garoonka Old Trafford.
Kulankiisa ugu horreeya waxa uu Jose Mourinho Laylin doonaa Tottenham ciyaarta London Debry oo ay booqanayaan West Ham United Sabtida soo aaddan.
RASMI: Kooxda Juventus oo heshiis cusub ka saxiixatay Leonardo Bonucci… + SAWIRRO
Tababare Cabdi Joon oo Taariikh cusub sameeyey